Nanatitra tolo-tanana ho an’ny traboin’i Enawo ny Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanaon’ny Tahirim-pirenena ny mifanome tanana amin’ny manodidina azy raha sendra loza. Izay rahateo no antom-pisian’ny Tahirim-pirenena. “Tsy vao sambany fa efa fanao ny fanampiana ara-tsosialy tahaka izao satria izy rahateo no miahy ny lafiny ara-tsosialy ho an’ireo mpiasa eny anivon’ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara” hoy Rakotomila izay Talen’ny fitantanana ara-bola sy ara-pitondrana eo anivon’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Ampahany amin’ny lahateniny izany rehefa avy nanolotra ireo fanampiana avy amin’ny Cnaps teny amin’ny foiben’ny Bngrc Antanimora. Ny alarobia 5 avrily antoandro no nanaovana izany. Niainga tamin’ireo mpiasan’ny Tahirim-pirenena manerana ny Nosy ireo natolotra ireo. Nosoritany fa isaky ny misy ny voina mahazo ny mpiray tanindrazana amin’ny loza voajanahary dia mitondra izay voatsirambin’ny tanana ny Cnaps sy ny mpiasa ao aminy.
Ny Talen’ny fitantanana ara-bola sy ara-pitondrana no nitarika ireo delegasiona avy eo anivon’ny Cnaps, iraky ny Tale Jeneralin’ny Tahirim-pirenena, Rabekoto Arizaka Raoul nanatitra izany teny an-toerana nitondra ny fanampiana. Nisy ny lelavola mitentina 1 110 400 ariary ary teo koa ny kojakoja ilaina toy ny savony ary firakotra miisa 500 sy vary 50 gony natolotra tamin’izany. Nandray ireo fanampiana ireo tamin’ny anaran’ny birao nasionaly momba ny fitantanana ny loza voajanahary kosa ny sefo admnistratera sivily Razafimandimby John Heriniandry, tale misahana ny “Cervo” (Centre d’Etude, de Réflexion, de Veille et d’Orientation) eo anivon’ny Bngrc.
Nankasitraka izao fihetsiky ny Cnaps izao ity tomponandraikitra ity satria tsy namela ho irery ireo niharam-boina, nampanantena ihany koa izy fa ho tonga soa aman-tsara any amin’ny olona tokony hiantefany ireo fanampiana ireo. Notsindriany fa mbola any amin’ireo toerana nandalovan’ny rivodoza ny mpiara-miasa amin’izy ireo manatanteraka fanadihadiana, manombana ny fahavoazana marina ary manao izay tandrify azy avy amin’ny fanampiana ny mponina satria mby eo amin’ny fanarenana ny fiainan’ireo mpoina niharam-boina amin’izay ny dingana ankehitriny. Efa eo am-piatrehana ny fiainana ireo mponina, hoy hatrany izy, ka dia mifanojo indrindra amin’ny ilana azy izao fanampiana izao.
Marihina fa maro ireo orinasa sy sampan-daharaham-pankana no manatanteraka hetsika tahaka izao ataon’ny Cnaps izao ary nanatitra ny anjara fifanohanana amin’ny samy mpiara-belona.